"သူမကကိုယ်ခံအားနည်းတာကြောင့် လူအများကြီးထဲသွားပြီးမလှူဒါန်းနိုင်ပေမယ့် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူပေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်" - Cele Connections
“သူမကကိုယ်ခံအားနည်းတာကြောင့် လူအများကြီးထဲသွားပြီးမလှူဒါန်းနိုင်ပေမယ့် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူပေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်”
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်ကိုတော့ အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ ဇာတ်ကားတိုင်းလိုလို ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို စိတ်ထဲနှစ်ကာ ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ဆိုလည်း မမှားလောက်ပါဘူးနော်။ သူမရဲ့ အပြုံးချိုချိုနဲ့ ပွင့်လင်းစွာ ပြောတတ်တဲ့ အပြောလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိလာတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ ခေတ္တအနားယူကာ အိမ်မှာနေရင်း အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ စံရတီမိုးမြင့်က” အခုလိုကပ်ဆိုးကြုံမှမဟုတ်ဘူး ငယ်ငယ်တည်းကလှူရတန်းရတာကိုဝါသနာပါတယ်.. အခုထိလဲအမြဲလုပ်တယ်.. ကိုယ့်ကိုယ်ခံအားကနဲတော့ လူအများကြီးထဲသွားပြီးမလုပ်ဖြစ်တာကလွဲရင် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က လူ, တိရိစ္ဆာန်အကုန်ရသလောက်ကူတယ်.. ကုသိုလ်တစ်ခုနေ့စဉ်ပြုဆိုတာကိုလဲမှတ်ထားပြီးအမြဲလုပ်တယ်. .သူများအကြောင်းမရေးဘူး မတင်ဘူး. .လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်တယ်.. မိသားစုကိုလဲကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ခွင့်ရတယ်.. လှအောင်နေတယ်.. .ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူ ကိုယ်ကချစ်တဲ့သူတွေနဲ့လဲပျော်ပျော်နေတယ်.. အားလုံးလဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်”လို့ဆိုကာ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
CeleConnections ပရိသတ်တွေအတွက် စံရတီမိုးမြင့်ရဲ့ ဆုတောင်းစကားလေးကို ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း စံရတီမိုးမြင့်ကို အားပေးချစ်ခင်တယ်ဆိုရင် မှတ်ချက်လေးတစ်ခုလောက်ရေးပေးခဲ့ကြပါနော်။
“သူမကကိုယျခံအားနညျးတာကွောငျ့ လူအမြားကွီးထဲသှားပွီးမလှူဒါနျးနိုငျပမေယျ့ တတျနိုငျတဲ့ဘကျက ကူပေးဖွဈတယျလို့ဆိုတဲ့ စံရတီမိုးမွငျ့”
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နာမညျကြျောရုပျရှငျမငျးသမီးတဈဦးဖွဈတဲ့ စံရတီမိုးမွငျ့ကိုတော့ အထူးတလညျမိတျဆကျပေးဖို့မလိုလောကျဘူးထငျပါတယျ။ စံရတီမိုးမွငျ့ကတော့ ဇာတျကားတိုငျးလိုလို ကရြာဇာတျရုပျကို စိတျထဲနှဈကာ ပီပွငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးတဈလကျဆိုလညျး မမှားလောကျပါဘူးနျော။ သူမရဲ့ အပွုံးခြိုခြိုနဲ့ ပှငျ့လငျးစှာ ပွောတတျတဲ့ အပွောလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုကို ရရှိလာတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ။
စံရတီမိုးမွငျ့ကတော့ အနုပညာအလုပျတှေ ခတ်ေတအနားယူကာ အိမျမှာနရေငျး အမှတျတရပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ စံရတီမိုးမွငျ့က” အခုလိုကပျဆိုးကွုံမှမဟုတျဘူး ငယျငယျတညျးကလှူရတနျးရတာကိုဝါသနာပါတယျ. .အခုထိလဲအမွဲလုပျတယျ.. ကိုယျ့ကိုယျခံအားကနဲတော့ လူအမြားကွီးထဲသှားပွီးမလုပျဖွဈတာကလှဲရငျ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ဘကျက လူ, တိရိစ်ဆာနျအကုနျရသလောကျကူတယျ.. ကုသိုလျတဈခုနစေ့ဉျပွုဆိုတာကိုလဲမှတျထားပွီး အမွဲလုပျတယျ. .သူမြားအကွောငျးမရေးဘူး မတငျဘူး..လကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျလုပျတယျ.. မိသားစုကိုလဲကောငျးမှနျစှာစောငျ့ရှောကျခှငျ့ရတယျ.. လှအောငျနတေယျ.. .ကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့သူ ကိုယျကခဈြတဲ့သူတှနေဲ့လဲပြျောပြျောနတေယျ.. အားလုံးလဲဒီတိုငျးပဲဖွဈကွပါစလေို့ဆုတောငျးပါတယျ”လို့ဆိုကာ သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာ ပျေါမှာတငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
CeleConnections ပရိသတျတှအေတှကျ စံရတီမိုးမွငျ့ရဲ့ ဆုတောငျးစကားလေးကို ပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး စံရတီမိုးမွငျ့ကို အားပေးခဈြခငျတယျဆိုရငျ မှ တျခကျြလေးတဈခုလောကျ ရေးပေးခဲ့ကွပါနျော။
” အချစ်ရေးပြန်လည်အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ချပြလာတဲ့ သဇင်နွယ်ဝင်း”
“သူမသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ဇာတ်ဝင်တေးလေးကို ပြန်လည်နားဆင်ပြီး မျက်ရည်ကျလောက်ထိတောင် ပြန်လွမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ ခြူးလေး”
သားလေးကို လက်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကဆုပ်ကိုင်ပြီး မိသားစု ပျော်စရာအချိန်တွေ ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်တို့ ဇနီးမောင်နှံ